Ho tonga amin’ny fanovana governemanta : nikasa hametra-pialana ny minisitry ny Vola ? | NewsMada
Ho tonga amin’ny fanovana governemanta : nikasa hametra-pialana ny minisitry ny Vola ?
Nikasa hanambara ny fametraham-pialany ? Nampiantso mpanao gazety, omaly alahady hariva tokony ho tamin’ny 5 ora hariva mahery ny minisitry ny Vola, Rakotoarimanana Gervais. Tsy raikitra indray anefa izany.
Nihemotra tamin’ny fotoana farany izany ary tsy raikitra ilay fikasana hanao valan-dresaka amin’ny mpanao gazety. Niely be ny feo avy eo fa hametra-pialana ny minisitry ny vola sy ny tetibola, Rakotoarimanana Gervais ary saika hanambara izany saingy tsy fantatra ny anton’izao fihemorana tampoka izao. Nisy tsindry na fanerena avy any amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena indray ny nihemorany ka tsy nirosoany amin’izany fialana izany ? Voalaza fa akaiky kokoa ary itokisan’ny mpamatsy vola ny tenany. Efa maromaro koa anefa ny fanehoan-kevitra nanebaka sy ny nanakiana ary nitsikera mafy mihitsy ity minisitra ity, any amin’ireo haino aman-jery samihafa, indrindra fa ireo akaikin’ny fitondrana tato ho ato.
Teo koa anefa ireo nanombana fa hampahatsiahy ny momba ny fivoahan’ny vola vaovao, anio, ity minisitra ity fa tsy raikitra indray.
Fialan’ny Praiminisitra Mahafaly
Etsy andaniny anefa, efa niely an-gazety ny herinandro teo fa ho tonga any amin’ny fanovana governemanta mihitsy ny raharaha, indrindra taorian’ny dian’ny filoha Rajaonarimampianina tany Frantsa, ny 28 jona teo ka nihaonany tamin’ny filoha frantsay, Emmanuel Macron. Nisy baiko sy toromarika avy any ? Mifandray amin’izany rehetra izany ny hahatongavan’ilay minisitra iray avy any ivelany (tokony ho tonga halina) ka handraisany an-tanana ny hitantanany ny governemanta manomboka izao ? Izany hoe ho tonga amin’ny fialan’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana ny raharaha ? Nikasa hiala mialoha ny fotoana izany ny minisitry ny Vola, Rakotomanana Gervais ka fanovana ampahany ihany ny hiseho ato ho ato ? Tsy azo an-telefaonina rahateo ny tenany, omaly hariva…